2 Samuel 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
9 Na Dawid bisae sɛ: “Obi da so wɔ hɔ a waka Saul fie a Yonatan nti+ metumi ayɛ no adɔe+ anaa?” 2 Ná Saul fie akoa bi wɔ hɔ a ne din de Siba.+ Enti wɔkɔfrɛɛ no baa Dawid nkyɛn, na ɔhene bisaa no sɛ: “Wone Siba?” Na ɔkae sɛ: “W’akoa ne no.” 3 Na ɔhene bisaa no sɛ: “Obi nni Saul fie bio a mede Onyankopɔn adɔe bɛyɛ no?”+ Ɛnna Siba ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Yonatan babarima bi wɔ hɔ a ɔyɛ obubuafo.”+ 4 Na ɔhene bisaa no sɛ: “Ɔwɔ he?” Ɛnna Siba ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Hwɛ! Ɔwɔ Amiel ba Makir+ fie wɔ Lo-Debar.”+ 5 Ntɛm ara na Ɔhene Dawid soma ma wɔkɔfaa no fii Amiel ba Makir fie wɔ Lo-Debar bae. 6 Bere a Saul ba Yonatan ba Mefiboset duu Dawid nkyɛn no, ɛhɔ ara na ɔkotow de n’anim butuw fam.+ Na Dawid kae sɛ: “Mefiboset!” Na ɔkae sɛ: “W’akoa ni.” 7 Na Dawid ka kyerɛɛ no sɛ: “Nsuro, na wo papa Yonatan+ nti mɛyɛ wo adɔe,+ na mɛdan wo nana Saul asase+ nyinaa ama wo, na woadidi me pon so+ daa.” 8 Ɔkaa saa no, ɔkotowee na ɔkae sɛ: “W’akoa ne hena a woatwa w’ani ahwɛ ɔkraman funu+ a ɔte sɛ me yi?” 9 Na ɔhene frɛɛ Saul somfo Siba, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ade biara a ɛyɛ Saul ne ne fie nyinaa dea no, mede ama+ wo wura banana no. 10 Enti dɔw asase no ma no, wo ne wo mma ne wo nkoa, na fa ɛso nnɔbae bra na wo wura banana fiefo nnya aduan nni. Wo wura banana Mefiboset de, obedidi me pon so daa.”+ Ná Siba wɔ mmabarima dunum ne nkoa aduonu.+ 11 Na Siba ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Nea me wura ɔhene hyɛe sɛ menyɛ mma n’akoa nyinaa no, ɛno ara na w’akoa bɛyɛ; nso Mefiboset+ didi me pon so sɛ ahenemma no bi.” 12 Ná Mefiboset wɔ ɔbabarima kumaa bi a ne din de Mika,+ na wɔn a wɔte Siba fie nyinaa yɛ Mefiboset nkoa. 13 Na Mefiboset tenaa Yerusalem, na odidii ɔhene pon so+ daa. Ná ɔyɛ obubuafo.+